Asarotam-piaro nitarika famonoana
Vehivavy iray 19 taona no maty novonoin’ny vadiny, ny alatsinainy maraina 08 septambra lasa, tokony tamin`ny 6ora sy sasany maraina, tao amin’ny fonkontany Ankirihiry Avaratra 11/58, vokatry ny disadisa teo amin’izy roa mivady.
Araka nambarany manondindina, matetika no misa disadisa amin’ ireto mpivady ireto ary matetika miafara amin’ny fisarahan’izy roa izany ary miravona ho azy izany raha lasalasa ny fotoana ka mbola mifamerina indray. Henon’ny manodidina avokoa ny feo mifamaly ataon’izy roa ary vao tsy ela akory izy ireo no nifamerina indray nialohan’izao tranga nisy izao.
Ny alin’ny alahady faha 07 septambra no nahenoan’ireo manodidina farany ny fifamalianan’izy roa, iray trano, nefa tsy nahataitra ny manondidina intsony izany. Noho ny tonga anefa ny maraina, ny alatsinainy, dia nahatsikaritra fihetsika hafahafa nataon’ ilay rangahy ny mpifanolo-bodirindrina tamin`ny zareo.
Tamin’ny maraina zareo mbola nifamaly fa aferan’ny mpivady sarotra idirana ka izahay nahare izy ireo nagnina dia tsy fantanay fa tamin’ny maraina foana dia lasa ilay rangahy nibaby saky ary nahidiny ilay trano, noentiny ny fanalahidin’ny trano. Tonga saina izahay hoe nagnino ilay zazavavy ao sao maty. Efa lasa elaela ilay lehilahy izay navanondoza dia novakiana ary nosokafina ny trano sady niantso ny rahavavin’ilay vehivavy nahidy antrano,raha vao voasokatra ny trano dia efa fatin’ ilay tovovavy no hita nitsiraraka tao antrano ary nahitana dian-drangotra teo amin`ny tedany ka niantso mpitandro filaminana izahay hoy ny mpifanolo-bodirindrina.
Vehivavy tanora, 19 taona i Francia, maty novonoin`ny vadiny.
Teloa andro taty aoriana dia nanatona ny biraon’ny Police i RAZAKAFIDY Stephan, vadin’i Francia, nitolo-tena, nitsotra ny marina ary niaiky tamin’ny heloka vitany. Asarontam-piaro diso tafahoatra no namonoan’i Stephan an’i Francia, nongendainy hatramin’ny faran’ny ainy. Araka ny fantatra dia tsy natory iray alina tao antranony ity ramatoa vadiny ity.
(78) Anderson RAVO : 10-09-2014 - 18:20